I-Semalt: Ama-plugin we-WordPress asebenza kanjani
Ukwakha i-plugin yakho ye-WordPress akuyona nzima kakhulu, futhi ingakwazi ukuxazulula izinkinga ezihlukahlukene zesayithi lakho. Ukukopisha, ukuhlela nokunamathisela amakhodi akwanele njengoba kuzodingeka uqonde ukuthi ama-plugin we-WordPress asebenza kanjani nokuthi angawabuyekeza kanjani kwifayela lemisebenzi.php. I-plugin yindlela ephephile yokwenza isayithi lakho libe ngokwezifiso.
UJason Adler, isazi esiphezulu esivela ku Semalt , uqinisekisa ukuthi kulula kakhulu ukuqala ngama-plugin wakho we-WordPress, futhi ungazi ukuthi asebenza kanjani. Ama-plugin we-Wordpress yizimpendulo ze-PHP noma amakhodi angashintsha isakhiwo sesayithi lakho, ubukeka futhi isikhathi sokulayisha jikelele. Banikeza ukusebenza okuphelele ngezingwegwe, yingakho beqonda ukuthi ama-plugin we-WordPress asebenza kanjani kubalulekile kuwo wonke amabhulogi kanye nomphathi wewebhu. Njengama-themes adingekayo ukwengeza ukusebenza nokubuka kusayithi lakho, ama-plugin we-WordPress akhulisa ukusebenza kwamakhasi akho wewebhu.
1. FTP kuwebhusayithi yakho
Into yokuqala okudingeka uyiqonde ukuthi i-FTP isebenza kanjani, futhi lokhu kungenziwa ngokusebenzisa uhlelo oluthile lwe-FTP, njenge-Coda. Uma ungasazi lutho ngo-FTP, siphakamisa ukuthi ukhohlwe lesi sinyathelo bese uqhubekela phambili esiteji esilandelayo.
2. Zulayela kufolda yakho ye-plugin ye-WordPress
Uma uthola ukufinyelela kuwebhusayithi ngokusebenzisa i-FTP, isinyathelo esilandelayo ukuhamba kufolda ye-plugin ye-WordPress. Le folda isendaweni ye-wp-content / plugins futhi kulula ukuyithola.
3. Dala amafolda amasha we-plugin
Kuzo zonke ama-plugin owadala, kubalulekile ukwakha ifolda ehlukile. Lokhu kulula ukudala, futhi nje udinga ukuya kudeshibhodi ye-WordPress bese ufaka igama lefolda yakho. Asikho isidingo sokufaka ama-dashes, izikhala, imigomo noma amanye amagama afana nawo okunzima ukuqagela.
4..Dala ifayela elikhulu le-PHP ye-plugin ye-WordPress
Esigabeni esilandelayo, kuzodingeka udale ifayela eliyisisekelo, okumele libe yifayela le-PHP ngaphakathi kwifolda yakho ye-plugin ye-WordPress. Qiniseka ukuthi unikeze igama elifanele kule fayela njenge-my-only-plugin.php. Uma usuqambe igama, ungakhohlwa ukuhlela ifayela bese ulondoloza izilungiselelo ngaphambi kokuvala iwindi.
5. Setha ulwazi lwe-plugin
Ukugcina kanye nenye yezinyathelo ezibaluleke kakhulu ukukopisha nokudlulisa imininingwane yakho ye-plugin kufayili enkulu. Kufanele uqiniseke ukuthi ugcine ikhodi elandelayo efayeleni futhi ulondoloze izilungiselelo.
Igama le-Plugin: I-Plugin Yami kuphela
I-plugin ye-URI: https://www.abcmywebsite.com/my-only-plugin
Incazelo: Ngu-plugin yami yokuqala ye-WordPress, futhi ngiyajabula ukuyidala.
Umbhali: Igama Lami
Umbhali URI: https://www.abc.mywebsite.com
Le khodi yikhompendulo ye-PHP, engeke ibonakale ngokuqondile esigabeni sakho se-WordPress '. Noma kunjalo, i-WordPress isebenzisa le khodi kanye nedatha efanelekile ukukhipha igama le-plugin yakho futhi ikusize uzuze kwamanye ama-plugin. Kufanele uqonde ngokugcwele ulwazi futhi ukhumbule ikhodi ekhulunywe ngenhla uma ufuna ukwazi ukuthi ama-plugin we-WordPress asebenza kanjani futhi enze imisebenzi yawo eminingi nsuku zonke.